Ikhasino ekwi-Intanethi ekhawulezayo | Amakhasino ahlawulwa kwangoko 2021
Ikhasino ekwi-Intanethi i-FastPay
Ujongano kunye nokusebenza
Ukukhethwa kweMidlalo nabaPhuhlisi beKasino ngokukhawuleza
Iibhonasi kunye nokwenyusa kwi-Fastpay
Iindlela zokufaka kunye nokurhoxisa imali
I-Fastpay yekhasino ekwi-Intanethi sisixhobo sokungcakaza onokuthi uthethe kakhulu ngaso kunye nexesha elide. Kodwa umbono wokuqala phakathi kwabangcakazi wenziwa emva kokufunda igama, kuba ziintlawulo ezikhawulezayo eziyimeko ebalulekileyo kubo bonke abatyeleli beziko lokungcakaza. UDirex NV Yazi ngale nto kwaye ngokuzithemba usebenza ekuphuculeni inkonzo-kulapho abathengi banokufumana i-winnings ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-15. Eli lixesha lokurekhoda, uninzi lwezixhobo zokungcakaza ezithandwayo ezingenakuqhayisa.
Yiya kwikhasino ubange ibhonasi
I-Casino ye-Fastpay isebenza ukusukela nge-2018, oko kukuthi, sele izinzile kwaye ifumene ingxelo evela kubatyeleli abaqhelekileyo kwiwebhusayithi esemthethweni. Akufuneki ukuba, bahlala benethemba. Oku kuyacaca, kuba ukongeza kwintlawulo ekhawulezileyo kwiklabhu ekwi-Intanethi, zikwabonelela ngokufikelela kuqokelelo olubanzi loomatshini bendawo, ukunyuselwa okunenzuzo, iibhonasi kunye neeraffles zamachibi amabhaso amakhulu. Ngamanye amagama, le yeyona ndawo kanye apho uyithandayo uyithandayo ikuvumela ukuba wenze imali yokwenene
Impumelelo yalo naluphi na uhlobo lokungcakaza luxhomekeke kwisimo solawulo kulungelelwaniso lomsebenzi walo. Yonke into ekwikhasino ekwi-Intanethi ekhawulezileyo icingelwa ukonwabisa kakhulu abatyeleli - uyilo lunomtsalane kwaye alunambono, ukuhamba ngokuhamba lula kakhulu, isiza sakhiwe kakuhle, unokufumana ngokukhawuleza amacandelo ayimfuneko kunye nolwazi oluyimfuneko kwimenyu.
Iindidi eziphambili kwi-Fastpay:
"Malunga nathi" - ulwazi malunga nabanini beqela, ukubalasela komsebenzi walo, abafowunelwa, ilayisensi;
"Iintlawulo" - ulwazi malunga neendlela zokuhlawula, iimali, iikhomishini, imigaqo yentengiselwano;
"Ukunyusa" - ukunyusa, iibhonasi, iitumente, i-sweepstakes kunye nenkqubo yokunyaniseka;
"Inkxaso" -indlela zonxibelelwano olukhawulezayo ngenkxaso kunye neempendulo kwimibuzo ebuzwa rhoqo kubadlali.
Apho ibha yokukhangela umdlalo ikwindawo, kukwakho namacandelo ongezelelweyo athi, ukuze kube lula, isoftware evela kwingqokelela yeklabhu ihlelwe. Oku:
I-Slots-oomatshini be-slot bakudala abanama-reels, imigca kunye neebhonasi zesiko;
"Imidlalo emitsha" - izinto ezintsha ezivela kubavelisi abathembekileyo;
"Phila" -isoftware yokudlala kumthengisi wokwenene;
"Thenga iNqaku" - iibhonasi ezinokuthi zithengwe ngabadlali ukongeza;
"I-Bitcoin, i-ETH, i-LTC" -imidlalo apho ukubheja kwi-cryptocurrency kufumaneka khona.
Iimpawu zokubeka eziphezulu zibonisiwe kwiphepha eliphambili. Apho ungabona amagama abaphumeleleyo bokugqibela, ubungakanani bokuwina, amagama emidlalo apho kudlalwa khona i-jackpot eqhubela phambili ngoku. Kwikona esezantsi ekunene kwesiza kukho iqhosha lokubonisa ifestile enencoko ekwi-intanethi- ungabhala apho xa kukho imibuzo engxamisekileyo kunye nokusonjululwa ngokukhawuleza kweembambano.
Ukuba ngaxa lithile ukufikelela kwindawo yekhasino ekwi-Intanethi inokulinganiselwa, ungangena kwiakhawunti yakho, kunye nokufikelela ekusebenzeni nakwiakhawunti usebenzisa isipili. Le ikopi epheleleyo yewebhusayithi esemthethweni yokusekwa, apho kukho yonke imidlalo efanayo, iibhonasi kunye nezinye izinto zesixhobo esiphambili.
Ukubhalisa iakhawunti entsha, kwanele ukugcwalisa ifom esemgangathweni ngokunqakraza kwiqhosha elithi"Bhalisa" kwikona ephezulu ngasekunene kwesiza. Ithi:
Kwinqanaba elifanayo, kufuneka uqinisekise ubudala bakho, kuba ngabantu abafikelele kwiminyaka eyi-18 abanokudlala ekhasino. Umthengi omtsha kufuneka avumelane nemigaqo kunye neemeko zoncedo, kwaye, ukuba unqwenela, avume ukuhanjiswa kwezithembiso zentengiso kunye neendaba zeklabhu.
Phambi kokurhoxiswa kokuqala kwemali kwiakhawunti, kubalulekile ukuba uhambe ngenkqubo yokuqinisekisa iakhawunti ngokubonelela ngolawulo ngeekopi zezazisi. Le inokuba ngumfanekiso ocacileyo wepaspoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba, iingxelo zebhanki, ifoto yekhadi lebhanki ukuba yayisetyenziselwa ukufaka idiphozithi. Ukuqinisekiswa kwamaxwebhu kuthatha ubuncinci bexesha - ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-10, emva koko ungafaka isicelo sokurhoxiswa kwemali kwimali eseleyo.
Uluhlu lweekhasino ezikhawulezayo lubandakanya oomatshini abangaphezulu kwama-2000. Zonke ezi zizizalo zengqondo zabavelisi abathembekileyo abazingqinele kwelona cala libalaseleyo- iBooongo, NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, Igrosoft, Amatic, Endorphina, Pragmatic Play nabanye. Ukuze kube lula ukukhangela, izihluzi ezininzi zibonelelwa ngaxeshanye, kuthathelwa ingqalelo iimpawu zobugcisa zesoftware. Iimveliso ezintsha ziphawulwe"Entsha" kwaye ukongeza kukho ifom yokukhangela ngegama.
I-Classic Slots lelona nqanaba lemidlalo libanzi kwiwebhusayithi yeklabhu. Ingqokelela ikwabandakanya malunga nemidlalo eyi-140 ehlengahlengiswe kwifomathi yomthengisi ophilayo (iimveliso ezivela kwi-NetEnt Live, ababoneleli be-Evolution). Kwinqanaba lokugqibela, unokufumana iindidi ezininzi ze-poker, i-roulette kunye neminye imidlalo yokungcakaza ngaxeshanye - ii-analogue zalezo zifumaneka kwiiholo zokwenyani.
Inkqubo yebhonasi ye-Fastpay yenzelwe abathengi abatsha nabaqhelekileyo. Zombini zinelungelo lokufumana inzuzo, ekhutshwa ngokuxhomekeke kubume obufunyenwe ngexesha lomdlalo. Inqanaba lokuqala libelwe abongcakazo ngokuzenzekelayo, kwaye ngokunyuka kwinqanaba ukuya kwi-11 ephezulu (emnyama), ukusebenza okukhoyo kuyanda - abadlali banokulindela ukufumana ipesenti ephezulu yembuyekezo kwiimali ezilahlekileyo, uncedo oluvela kumphathi wakho kunye nezinye iibuns eziluncedo. Amanqaku amava, afunekayo ukwandisa inqanaba lomdlalo, anokufumaneka kwiidiphozithi kunye nokubheja kwiindawo zokubeka.
Ukubhatalwa okukhawulezayo, kuboniswe kwigama lesiza, yeyona nto iphambili kuyo. Ngokwemithombo yobutyebi, ubuninzi beeyure zinikezelwa ekuqhubekeni kwezicelo zokwenza imicimbi yemali. Inkqubo yokuqinisekisa, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, ithatha ukuya kwimizuzu eli-10. Zili-9 iimali ezahlukileyo kunye nezi-5 zokufakwa kwemali kwi-intanethi ezikhoyo kwindawo yokugcina iakhawunti kunye nokubheja kwimidlalo
Iindlela zokuhlawula ezikhoyo yimisebenzi enamakhadi ebhanki, izipaji zenkqubo yokuhlawula ngekhompyuter, iiakhawunti zabaqhubi beeselfowuni kunye nezipaji zekhompyuter. Kwindlela nganye, kukho amaxesha ahlukeneyo (emva kokuqhubekeka kwesicelo ngolawulo lwekhasino ekwi-Intanethi Fastpay) kunye nemida. Akukho khomishini ihlawulwayo. Emva kokwenza idiphozithi, imali ingasetyenziselwa ukubheja kwimidlalo ngokukhawuleza.